သွား…သွား…ဘယ်လိုတိုက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » သွား…သွား…ဘယ်လိုတိုက်
Posted by P zer on Jul 23, 2011 in Health & Fitness, How To.. |0comments
How to Brush your teeth သြားဘယ္လို တိုက္ၾကမလဲ
ရွာထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ. ပတ်သက်တဲ. ဗဟုသုတ ရစရာလေးတွေ ဖတ်ရတော. အလွန်ပဲ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင်. ကျမလဲ ကိုယ်တတ်စွမ်းသလောက်နဲ. အားလုံးကို ဗဟုသုတ အဖြစ် ဖြန်.ဝေပေးချင်တာကြာင်. ဒီ Post လေးရေး ဖြစ်ပါတယ်..
ကျမဆေးခန်းထိုင်တိုင်း တွေ.ရတာလေးတခုက လူနာတော်တော်များများက သွားတော.တိုက်ကြပါတယ်. ဒါပေမဲ. စနစ်မှန် သွားတိုက်နည်းကိုတော. သိကြသူ နည်းပါတယ်.. သွားတိုက်ဖို. ပထမဦးဆုံး သင်.တော်တဲ. သွားပွတ်တံ တစ်ချောင်းလို ပါမယ်.. သွားပွတ်တံရဲ. ထိပ်ဟာ ဘဲဥပုံ ( oval shape ) ဖြစ်သင်.ပါတယ် (ဒါမှ အံသွားတွေရဲ. အဆုံးနေရာထိ သန်.ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ပါမယ်) ။ သွားပွတ်တံရဲ. အမွေးအမျှင်တွေဟာ နူးညံ.ရပါမယ်.. သွားတိုက်ဆေးမှာ ဖလူအိုရိုက် ( Fluoride ) ပါရပါမယ်။သွားတိုက်ဆေးကို သင်.တော်သလောက် ( အများကြီး မလိုအပ်ပါ) ထည်.ပြီးရင် သွားစတိုက်ပါမယ်..
ခံတွင်းရဲ. ဘယ်ဘက် (သို.မဟုတ်) ညာဘက် ကိုယ်အားသန်ရာက စတင်နိုင်ပါတယ်.. ဘယ်ဘက်ကစမယ်ဆိုရင် အပေါ်ဘက် အံသွားတွေနဲ. သွားဖုံးကြားမှာ သွားပွတ်တံကို ၄၅ ဒီဂရီ ခန်.စောင်းပြီးတင်ပါ။ပြီးရင် သွားပွတ်တံကို ၂ ချက် ၃ ချက် လှုပ်ပေးပါ ( သွားနဲ. သွားဖုံးကြားက အညစ်အကြေးတွေ ထွက်သွားအောင်လို.ပါ) ပြီးရင်တော. သွားပွတ်တံကို အပေါ်ကနေ အောက်ဘက်ကို တံမြက်စည်းလှည်းသလို တိုက်ချပေးရပါမယ်..တစ်နေရာကို ၅ ချက်ကနေ ရ ချက်အထိတိုက်ပေးရပါမယ်.. အံသွား(molars )တွေပြီးရင် ရှေ့အံ (premolars ) တွေကို တိုက်ပါမယ်.. ပြီးရင် ရှေ့သွား (incisors)တွေကို တိုက်မယ်… ဘယ်ဘက်ခြမ်းပြီးရင် ညာဘက်ခြမ်းကို ဆက်တိုက်သွားပါမယ်..ဒါဆိုရင် အပေါ်သွားအားလုံးရဲ. ရှေ.ခြမ်းကို တိုက်လို.ပြီးပါပြီ။.. ဆက်ပြီး ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဟလို. အပေါ်အံသွားတွေရဲ. အစာဝါးတဲ. မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ပါမယ်..ပြီးရင်တော. အပေါ်သွားတွေရဲ. အတွင်းဘက် မျက်နှာပြင်ကို တိုက်ရပါမယ်။ အတွင်းမျက်နှာပြင်ကို တိုက်တဲ.အခါ သွားပွတ်တံကို သွားမျက်နှာပြင်ပေါ်တင်ပြီး အတွင်းကနေ အပြင်ကို ဆွဲထုတ်သွားရပါမယ်..ဒါဆို အပေါ်သွားတစ်ခြမ်းတိုက်ပြီးသွားပါပြီ။
အောက်သွားတွေကိုလဲ ထိုနည်းတူပါပဲ…သွားဖုံးနဲ. သွားကြားမှာ သွားပွတ်တံကို ၄၅ ဒီဂရီခန်.စောင်းတင်ပေးပြီး ၂ ချက် ၃ ချက်လှုပ်ပေးရပါမယ်။ အပေါ်နဲ. မတူတာကတော. သွားပွတ်တံကို အောက်ကနေ အပေါ်ကို တံမြက်စည်းလှည်းသလို ပင်.တင်ပေးရပါမယ်။ သွားတိုက်တဲ.အခါ မျက်နှာပြင်အားလုံး စုံအောင်တိုက်ရပါမယ်..ပြီးရင် လျှာကိုပါတိုက်ရပါမယ်..သွားတိုက်ချိန်ဟာ အနည်းဆုံး ၃ မိနစ်ခန်. ရှိရပါမယ်။
သွားတွေကို မနက် ( မနက်စာ စားပြီး) တစ်ကြိမ်၊ ညအိပ်ရာ ဝင်ခါနီး တစ်ကြိမ် တစ်နေ.ကို ၂ ကြိမ်တိုက်ပေးရင် ရပါပြီ…
အားလုံး ပြုံးအလှပိုင်ရှင်များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ…..